Somali daily News – Ciidamda Xasilinta Magaalada Oo Rag Hubeysan Iyo Hubkoodii Ku Soo Qabtay Degmada Waabari ee Magaalada Muqdisho….
Ciidamada Xasilinta magaalada Muqdisho ayaa maanta howlgal ay ka sameeyeen Degmada Waabari ee gobolka Banaadir waxa ay kusoo qabteen hub iyo ragii watay.
Sida aan Wararka ku helnay ciidamada xasilinta ayaa galay guri loo farmuuqay ay ku sugnaayeen rag hubeesan oo la sheegay in ay katirsanaayeen ciidanka Milatariga Soomaaliya, waxa ayna ciidamada gurigaasi kasoo qabteen hub iyo ragii watay.
Ciidamada ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay labo nin oo watay qoraga AK-47 , waxa ayna ciidamada kaxeesteen askartaasi iyo hubkii ay wateen, walina lama oga cida ay ka amar qaataan ragaasi hubeesan ee laga soo dhax qabtay Degmada Waabari.
Ciidamada Xasilinta Caasimada Muqdisho ayaa xoojiyay howlgaladii ay kawadeen magaalada Muqdisho, waxa ayna ciidamada hada bilaabeen in guryaha ay ku dhuumanayaan raga hubeesan ay galaan kadib markii ay magalaada inta badan ka nadiifiyeen ciidankii hubeesnaa.
Magaalada Muqdisho ayaa hada laga dareemayaa isbadal dhinaca amaanka ah, waxaana magaalada ku yaraaday askartii iyo maleeshiyaadkii hubeesnaa, waxaana hada meel ay galaan la’ askarta Mllatariga iyo maleeshiyaadka hubka ku heesta Muqdisho.